A ga-eme ka Galaxy Fold na September 18 | Akụkọ akụrụngwa
Samsung kwadoro ụbọchị mmalite nke Galaxy Fold
Edere Esteban | | Mobiles, Telephony
Samsung gosipụtara Galaxy Fold na February afọ a. N'ụzọ dị otu a ọ ghọrọ ekwentị izizi mbụ na ahịa, yana mmalite mmalite nke Eprel. Ọ bụ ezie na tupu ịtọhapụ ya ọtụtụ nsogbu na ekwentị n'echebe ihuenyo na akụkụ nke ihe mgbatị na-egbu oge ịmalite ya ruo mgbe ebighị ebi.
N’ikpeazụ, izu ole na ole gara aga enwere akụkọ. Samsung kwadoro nke ahụ ekwentị ga-oru na September. Ugbu a, anyị enwerịrị niile data na mwepụta nke Galaxy Fold n'ahịa a kwadoro, kwadoro site n'aka onye nrụpụta Korea n'onwe ya. Ọ ga-arụ ọrụ n'oge na-adịghị anya.
Na Saụt Koria a ga-eresị ya echi, dịka amara ya na mbụ. Otu n'ime nnukwu obi abụọ bụ mgbe ekwentị a ga-amalite na Europe, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ ekwughị ihe ọ bụla. Samsung gosipụtara ugbu a na Galaxy Fold ga-ere ire na September 18 na France, Germany na United Kingdom. Na mgbakwunye, enwere ike ịzụta ụdị ya na 5G na Germany na United Kingdom.
N'ihe banyere Spain anyị ga-echere obere oge. Samsung gwara anyị na ekwentị ga-ebido n’etiti ọnwa Ọktoba n’ala anyị, ọ bụ ezie na enweghị ụbọchị ọ bụla akọwapụtara n'oge ahụ. Ha ga-enye anyị ụbọchị n'oge na-adịghị anya. Amabeghị ma ụdị 5G a ga-ebidokwa na Spain.
Ihe anyị maara bụ ọnụahịa nke nsụgharị abụọ a nke Galaxy Fold. Normaldị nsụgharị ahụ na-akwụ ụgwọ na ego 2.000 euro, mgbe a ga-ere ihe nlereanya nke 5G dị na euro 2.100, dị ka onye nrụpụta Korea kwuru. Ha abụrụlarị ọnụahịa gọọmentị nke ngwaọrụ a.
Oge nke otutu mmadu chere kemgbe onwa. Mwepụta nke Galaxy Fold bụ ihe gọọmentị na n'ọtụtụ ahịa, ọ ga - abụ ọkwa na - erughị izu abụọ. Maka ndị ọrụ na Spain, nchere ahụ ga-adịtụ ogologo, mana opekata mpe na anyị amaraworị na n'ime otu ọnwa anyị nwere ike ichere maka ekwentị Samsung a na-adịgide adịgide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung kwadoro ụbọchị mmalite nke Galaxy Fold
Amazon na-enye Amazon Fire TV Stick 4k na Spain